トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Jereo ny lafiny-fahazarana pachinko efi-trano [fantsika fanitsiana sy ny fantsika Apok ed.]
Rehefa nandeha matetika ny hilalao amin'ny pachinko efi-trano, Mino aho fa isika dia hahita ny tanjona voalohany dia ny modely tsirairay. Noho izany, dia ny fantsika fanitsiana izay tiako mba hamantarana. Nail fanitsiana, na misy vonona ny hametraka ny toeram-pivarotana, dia lasa ara-nofo ihany koa ny fanapahan-kevitra na tsia. Ankoatra ny raharaha, toy ny CR, satria toy izany indraindray Hanemono fantsika ankapobeny fanitsiana dia mizara ny vokatra, ny olona dia tsy ho afaka ny handeha mba tsy lalandava ny fantsika fanitsiana izay indrindra lalao ho Hanemono afovoan-.
fantsika fanitsiana, mpitantana na ny lehibeny ihany koa hanao olona iray manokana, toy ny fantsika mpanakanto Ara-dal?na. Ny olombelona, ??na dia ny fiainana matetika misy fahazarana. Ny zava-misy fa olona manokana ihany koa tanterahina ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko dia ny hoe zatra fanitsiana ny fivarotana ny tsirairay no azo antoka. Raha Minukere zatra fantsika fanitsiana, mandresy, dia hiakatra isan-jato noho ny an-jambany napetraka.
Noho izany, dia mampiditra ny mahita ny alalan 'ny fomba fanitsiana fantsika.
ny mahita ny alalan 'ny fantsika fanitsiana, amin'ny alalan'ny pachinko efi-trano momba ny tapa-bolana avy amin'ny herinandro kely indrindra ianao, dia tokony hitandrina. Raha niresaka momba ny antony, satria ny fantsika fanitsiana atao amin'ny maha samy hafa ny vitsivitsy millimeters, fa tsy ika mafy hita tao amin'ny Pin fotoana, malahelo ianao. Beginners, ary tsy ampy ny mahafantatra fa fiandohan'ny dia mazava fijery misokatra, dia milaza fa sarotra ny hamaritana whether're tena misokatra. Na misokatra izay manodidina ny hoho
nosy, dia tsy misy fepetra ka tsirairay tsena, tsy hoe eto, na izany aza, rehefa mijery ny fantsika avy any ambony, miezaka mitady izany karazana fantsika Please. Ao
, dia ny fantsika fanitsiana ny mora-to-hahatakatra tsara indrindra nanomboka.
ny fantsika fanitsiana ny hanenjanany fihetseham-po eo amin'ny pachinko parlors, iray amin'ireo fantsika, kely noho ny lafiny ny fanombohan'ny chucker, dia raharaha izay ho tonga ny fantsika teo ivelany. Kanefa kosa raha ny fantsika ity fanitsiana, dia toerana iray antsoina hoe inenina avy ny hafainganam-pandehan'ny rotational 1 minitra tokony ho in-5. Fanitsiana, azafady mieritreritra fantsika ara-dal?na fanitsiana ny fiovam-po avo tahan'ny pachinko parlors.
Raha toa ianao ka bebe kokoa hanenjanany, manomboka Chat Along andaniny roa amin'ny fiara, dia ho hitanao hifanindry na fantsika. Kanefa kosa raha ny fantsika ity fanitsiana, dia toerana iray antsoina hoe in-dimy avy amin'ny hafainganam-pandehan'ny rotational 1 minitra momba ny in-4.6. Tamin'ny andro famoriam-bola, raha tianao dia tena tombony lehibe, tandremo tsara satria ny fantsika fanitsiana izay hita any amin'ny toerana sasany. Raha toy izany no namely ny hanenjanany fantsika, dia ho vita haingana Nante arivo Yen. Ao
, mijery ny fantsika hatrany ambony ka ny mifanohitra amin'izany, fantsika na iray amin'ireo fantsika, dia misokatra ho an'ny any ivelany noho ny fanombohan'ny chucker na dia kely dia tsara fantsika. Raha mijery avy any ambony, mazava fahasamihafana ao hitanao. Fa izany matetika no hita fantsika fanitsiana toy izany fisehoan-javatra. Amin'ity tranga ity, ny rotational hafainganan'ny ny 1 minitra dia ho avy ny 6 in-7 in-. Teo an-daniny ny
fantsika, na misokatra ny hita, hisy ny vahoakan 'ny fahazarana ny fantsika fanitsiana. Ao amin'ny toeram-pivarotana pachinko fitsidihana ny olona rehetra, na raha manokatra ny fantsika, azafady miezaka ny hanamarina.
Ankoatra izany, kely aloha ambanin'ny Windmill, dia misy toerana izay misy banga eo amin'ny fantsika sy ny fantsika.
lafiny roa amin'ny fantsika ny banga, fantsiho ny lafy ratsiny dia, alohan'ny mankany amin'ny voalohany, dia efa nanitsy, toy ny baolina mianjera amin'ny tany. Nail fanitsiana, satria manorina ny birao manontolo, fa tsy manomboka, fantsika lafiny Mampirisika anao koa izahay mba miezaka ny hanamarina.
Na dia tsy mijery ny hatramin'izao fantsika, fantsiho ny fototra izay jerena avy any ambony, Mino aho fa raha ny saina no nandoa hafa slingshot mankafy Can. Izany dia toerana izay in-5 hatramin'ny 6 in-. Tamin'ny andro famoriam-bola, raha tianao dia tena tombony lehibe, tandremo tsara satria ny fantsika fanitsiana izay hita any amin'ny toerana sasany. Raha toy izany no namely ny hanenjanany fantsika, dia ho vita haingana Nante arivo Yen. Ao
Na dia tsy mijery ny hatramin'izao fantsika, fantsiho ny fototra izay jerena avy any ambony, Mino aho fa raha ny saina no nandoa hafa slingshot mankafy Can. Misy soso-kevitra fa ianao miezaka.
Na dia tsy mijery ny hatramin'izao fantsika, fantsiho ny fototra izay jerena avy any ambony, Mino aho fa raha ny saina no nandoa hafa slingshot mankafy Can.